ဇင့်ကိုယ်ထည်သည်အကွေ့အကောက်များသောကိုယ်ထည်ပါ ၀ င်သည့်လက်တရုတ်ခြင်းကာကွယ်မှုလက်ပေးသွင်းသူ - လက်ကားရောင်းသူနှင့် ၀ ယ်ယူမှုလျှော့စျေးထုတ်လုပ်ခြင်း - Dongguan Dabeini Electronics Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > insulator တွင်လည်းလက် > Braided ကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု > မိမိကိုယ်ကိုအကွေ့အကောက်များသောလက်ကိုင်ကာရံထားသောဇစ်ပြား
Zipper Shielding Self-Winding Braided Sleeve မိတ်ဆက်:
ပါ ၀ င်သောကာကွယ်မှုလက်အမျိုးအစားမှာ polyester monofilament နှင့် polyester multifilament တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်လက်ဖြင့်ကြိုးဖြင့်ကာကွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပူလွန်ကဲမှု၊ မီးခံနိုင်ခြင်း၊ ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုရှိသည်။ ပွင့်လင်းသောတည်ဆောက်ပုံသည်ဝါယာကြိုး၏ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရမတူညီသောအကျယ်အဝန်းအမျိုးမျိုးရှိသောအရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုယက်ခြင်းများကို monofilament (သို့) သုံး filament ဖြင့်ယက်နိုင်သည်။
ပါ ၀ င်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကာအကွယ်ပေးသည့်ဇင့်ကိုယ်ထည်:
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ application range သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကွန်ပျူတာစွမ်းအားကြိုး၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုကေဘယ်ကြိုးများကိုတပ်ဆင်ထားသောကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အသုံးချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လှပသောအလှဆင်မှုကိုရရှိရုံသာမကပါဝါကြိုး၊ အပူဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပါဝါကြိုး၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးသည်တိုတောင်းသောလောင်ကျွမ်း။ မီးစွဲလောင်ပါကကျစ်လစ်သောကွန်ယက်ပြွန်သည်မီးလျှံကာနောက်ဆုတ်နိုင်သည်၊ မီးအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပြီးထုတ်ကုန်၏လုံခြုံမှုကိုများစွာမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုမော်တော်ကားများ၊ ဝါယာကြိုးများနှင့်ကေဘယ်ကြိုးများ၌လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
1. အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -50 ~ + 150âပုံမှန်အသုံးပြုရန်။
2. Flame နှောင့်နှေး: VW-1; အရည်ပျော်မှတ် 250 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်
3. ရေစုပ်ယူမှု - â0.5%၊
4. ပစ္စည်း: ယက်ကွက်ပြွန်၏အဓိကပစ္စည်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော polyester, နိုင်လွန်နှင့် PET ပိုးနှင့်အတူယက်;
၅။ ရည်ရွယ်ချက် - HDMI ကေဘယ်၊ DVI ကေဘယ်၊ ဝါယာကြိုးနှင့်ကေဘယ်၊ ကွန်ပျူတာပါဝါကြိုး၊ ကွန်ပျူတာအရံကေဘယ်၊ ကွန်ပျူတာအိတ်ဝါယာကြိုးကြိုး၊ နားကြပ်ကေဘယ်၊ အသံဗွီဒီကေဘယ်၊ ကွန်ယက် Jumper၊ coaxial ကေဘယ်လ်၊ တံမြက်စည်း၊ ပြားကြိုး၊ AV ကေဘယ်လ်၊ လျှပ်စစ်မီးကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း၊ အလင်းရောင်၊ လေအေးပေးစက်များ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ အဝတ်လျှော်စက်များနှင့်အခြားအိမ်သုံးအသုံးအဆောင်များအပြင် optical cable များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ မော်တော်ကားများ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းများ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများ၊ လေယာဉ်များ၊ စက်ယန္တရားကြီးများနှင့် အခြားလိုင်းများ၊
6. ထူးခြားချက်များ - အလွန်နူးညံ့သောပျော့ပျောင်းခြင်း၊ ကွေးရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ချောင်ခြင်းသို့မဟုတ်တင်းကျပ်ခြင်း၊ ခဲဝါယာကြိုးများကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကောင်းမွန်ခြင်း၊
၇။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည်မွမ်းမံခြင်း (သို့မဟုတ်) သုံးမျိုးတွဲဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအကျယ်၊ အရောင်၊
ပါ ၀ င်သည့်အကွာအဝေးရှိသောကိုယ်ထည်ဖြင့်ချုပ်ထားသောဇစ်ပြား -
၁။ ကွန်ပျူတာပါဝါကြိုးများ၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုကေဘယ်လ်များ၊ အလင်းရောင်၊ လေအေးပေးစက်များ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ အဝတ်လျှော်စက်များနှင့်အခြားအိမ်သုံးအသုံးအဆောင်များအပြင် optical cable များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ အလင်းရောင်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများစသည်တို့အတွက်သင့်တော်သည်။
6. A / V ကိုဝါယာကြိုး, terminal ကိုဝါယာကြိုး, ဒေတာဝါယာကြိုးများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်း။
Self- အကွေ့အကောက်များသောကျစ်ထည် parameters တွေကိုကာကှယျ Zipper:
အတွင်းအချင်းd(mm)
ထုပ်ပိုးခြင်း (M / Roll)
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါအချက်အလက်သည် PET monofilament နှင့် multifilament များအတွက်ဖြစ်သည်
Zipper မှအကာအကွယ်ပေးသည့်ကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်လက်တံများထုတ်လုပ်ခြင်း -
Hot Tags: အထီးကျန်လက်, တရုတ်, Zipper အကာအကွယ် Self- အကွေ့အကောက်များသောကျစ်လက်ထုတ်လုပ်သူ, လက္ကား, ဝယ်, စျေးနှုန်း, အမြောက်အများ, လျှော့စျေး, ကိုးကား။